“ကျွန်တော် ဒီသီချင်းလေး ကို အများကြီး အပင်ပန်းခံ စိတ်နှစ်ပြီး လုပ်ခဲ့တာတွေက အခုလို ဖြစ်သွားတာ အရမ်းစိတ်ထိခိုက်ပါတယ်ဗျာ .အနုပညာကို အနုပညာလိုပဲ မြင်ပေးပါဆိုတဲ့ စကားကို မပြောတော့ပါဘူး . တကယ် ရူးသွတ်ထားတာပါ . ကျွန်တော့် မှာစည်းလုံးစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလွဲပြီး ကျန်တာ ဘာမှ မရှိပါဘူး .ဒီနေ့ ဒီသီချင်းလေး ကြောင့် စိတ်အနှောင့်ယှက် ဖြစ်သွားသူတစ်ယောက်စီ တိုင်း .ကျွန်တော် နဲ့ ခင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ချို့ရော ကျွန်တော့် ထက်ငယ်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေရောကြီးတဲ့ အနုပညာရှင်တွေရော တခြား နယ်ပယ် အသီးသီးမှ လူအယောက်စီတိုင်း စိတ်အနှောင့်ယှက်ဖြစ်သွားရင် တကယ် တောင်းပန်ပါတယ် ခင်များ .”
“ဘာဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်မှာ ပဲ တာဝန်ရှိပါတယ်ခင်များ ပါဝင်တဲ့ သူများနဲ့ လုံးဝ မဆိုင်ပါဘူး . အကုန်လုံး မေတ္တာဖြစ်ကူညီကျတာပါ . သူတို့နဲ့ လုံးဝ မဆိုင်ပါဘူး ခင်များ . ဆဲချင်တဲ့ သူများ ကျေနပ်အောင် ဆဲကျပါ . Comment ဖွင့်ထားပါတယ် . အရင်တုန်းက တော့ စိတ် အခန့်မသင့်ရင် Block တယ် . အခုကတော့ ကျွန်တော် မBlock ပါဘူး . လွတ်လာစွာ ကြိုက်သလို ပြောဆိုလိုရပါတယ်ခင်များ .ကျွန်တော် စိတ်ရင်းနဲ့ ရပ်တည်ချက်ကိုတော့ မြင်စေချင်ပါတယ်ခင်များ . အားလုံး ကို ထပ်ပြီး တောင်းပန်ပါတယ် 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏”
ပရိသတ်ကြီးရေ… လူတိုင်းအမှားနဲ့မကင်းနိုင်တာမို့ ပရိသတ်ကြီးကလည်း ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။